Cristiano Ronaldo oo ka maqnaan doona Manchester United kulankooda maanta ay wajahayaan Crystal Palace – Gool FM
(London) 22 Maajo 2022. Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu seegi doono kulanka ugu dambeeyey Manchester United horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2021-22, kaasoo ay maanta la leeyihiin naadiga Crystal Palace.
Red Devils ayaa u baahan inay garaacdo Eagles maanta si ay u xaqiijiso inay ku dhammaysatay booskeeda lixaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxaana ay middaasi la micno tahay in ay xilli ciyaareedka soo socda u soo bixi doonaan Europa League oo ay West Ham United booskaas kaga adkaan doonaan.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Tababare Ralf Rangnick ayaa la sheegayaa inaysan heli doonin adeegga gooldhaliyahooda, waxaana Ronaldo uu qarka u saaran yahay inuu seego kulanka maqribnimada maanta ka dhacaya garoonka Selhurst Park.
Warsidaha The Athletic ayaa warinaya in 37-sano jirkaan uu dhaawac sinta ah ku seegi doono kulanka ay booqanayaan kooxda tababare Patrick Vieira.
Ronaldo ayaa dhaawac kan la mid ah ku seegay kulammadii Aston Villa iyo Manchester City horraantii xilli ciyaareedka, waxaana hadda la filayaa inuu ka maqnaan doono kooxdiisa kulankooda ugu dambeeya xilli ciyaareedkan 2021-22.